အဆိုပါဆစျသီယနျးသူကားအဘယ်သူရှိသနည်း | အလုံးစုံတို့အဘို့အသုံးဝင်သောသတင်းအချက်အလက်များ
ဆစျသီယနျး — это древние кочевые племена, которые проживали на огромной территории от Ирана до Восточной Европы. Скорее всего, скифы — не единый народ, а сборное название многих племен, оттого и идут споры о их происхождении и исчезновении.
ဤရွေ့ကားအမျိုးအနွယ်ကိုကောင်းစွာပါဝါနှင့်ဆစျသီယနျး၏ကြီးမားသောအရေအတွက်ကသိသောရှေးဟောင်းဂရိလူမျိုးတို့ကဆစျသီယနျးတောင်းဆိုခဲ့သည်။ ဥပမာ, ဆစျသီယနျးဟီရိုဒိုးတပ်အချို့အရှည်မှာရေးသားထားပါတယ်။ အဆိုပါစကားလုံး quote; skifquot; schitonosetsquot;; Quote ကိုဆိုလိုဘဲ, နှင့် quote; luchnikquot; လျက်, ရှေးဟောင်းဂရိဒဏ္ဍာရီအပေါ်, Hercules မြှားပစ် Hercules လေးကိုနှင့်မြှားပေးတဲ့သူ skiff Tevtar သင်ပေးတယ်။
အဆိုပါဆစျသီယနျး, ရှေးစာမူနှင့်အညီ, အရှေ့ကနေလာခဲ့ကြပြီးမြောက်ပိုင်းပင်လယ်နက်ကမ်းခြေ၌နေ၏။ ဒါကြောင့်ဖြစ်ကောင်းခန့် Alexander Blok ရုရှားသွေးထဲတွင်ရေးသားခဲ့သည်ဘယ်လိုဆစျသီယနျး၏အသွေးကိုအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုရှိ၏။
အဆိုပါဆစျသီယနျးဘယျလိုရှိကြ၏သငျသညျ Quote အဖြစ်လူသိများသည်ရွှေထုတ်ကုန်များ၏ရုပ်ပုံများကိုတွေ့နိုင်ပါသည်; ကိုရွှေ skifovquot; သစ်ယူကရိန်းအစိုးရက Maidan ၏အောင်ပွဲ၏ပထမဦးဆုံးရက်ပေါင်းအတွက်အနောက်နိုင်ငံများမှထွက်ခေါ်ဆောင်သွားခဲ့သည်။
ဆစျသီယနျး — это народ, который существовал 3000-2000 лет назад.
Некоторые ученые утверждают, что печенеги, восточные славяне и хазары — это тоже ဆစျသီယနျး.
ယေဘုယျခုနှစ်, ဆစျသီယနျးတချို့ခက်ခဲဒေတာရှိသည်, ဒါပေမယ့်ပိုပြီးပဟေဠိများနှင့်ယူဆချက်။
Скифы — это группа иранских народов, проживавших в Восточной Европе (главным образом в Причерноморье) и Сибири в античное время, с началом Великого Переселния Народов скифами стали называть не только иранские, но и все кочующие народы данного региона (готов, хазар, аланов и других). Вымерший скифо-сарматский язык является предком современного осетинского языка.
အဆိုပါဆစျသီယနျး prorusy, ploughmen ခဲ့ကြသည်တော်မူသောငါတို့၏ဝေးကွာသောဘိုးဘေး ရှိ. , မုဆိုးများနှင့်ငါးဖမ်းသမားအခြေချခဲ့သည်။ ဒါဟာတစ်သွယ်တည်ဆောက်ဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာကြီးသောလူမျိုး, ချောမော features တွေမြင့်မားတိုးတကျမှုဖြစ်ခဲ့သည်။ သူတို့ဟာအနှစ်ဘီစီ။ 10-8 တထောင်နှင့်အတူရုရှားမြောက်ပိုင်း esch တှငျနထေိုငျနှင့် Urals ၏တောင်ခြေဖို့ Varangian ပင်လယ်မှပြည်မှစည်ပင်။ Mikhailo Lomonosov ရုရှားမှူးမတ်တို့သည်အခွန်ဆက်များအတွက်လာသော Varangian ရုဆန့်ကျင်လှုပ်ရှားမှုများအတွက်သူတို့ရဲ့ပါဝင်ပတ်သက်မှုကိုဆွဲငင်အကြောင်း, ဤလူပင်လယ်နက်ထဲကနေလာသည်ဟုယုံကြည်ကြသည်, ထို့နောက်ရုရှားပင်လယ်နှင့်အလွန်တိုက်ခိုက်နေသောဖြစ်ခဲ့သည်။
Греки называли все славяно-скифские племена щитоносцами, потому что это боевое оружие было изобретено скифами. На всех сохранившихся изображениях скифы всегда со щитами, например персидские воины без них. У Скифов щит был символом защиты власти, который унаследовали их потомки славяне.Сарматы и Сколоты тоже принадлежали к Скифскому племени. Вот почему Геродот утверждал, что quot;Сколотыquot; — это царское название и принадлежит Скифам, которые знали сво превосходство и носили название quot;Царские скифыquot;.
သို့သော်ဤအရာအလုံးစုံအမည်များကိုနိုင်ငံခြားသားတွေကစတီထွင်အပေါင်းတို့နှင့်တကွ, Slavic အမြိုးအနှယျအဘို့မိမိတို့ယေဘုယျအမည်ဖြင့် Quote ရှိ၏ ROSSYquot;
Posted in, horoscopes, မှော်, ကံဇာတာပြောရာမှာ
21 အဆိုပါဒေတာဘေ့စဖို့ query လုပ်တဲ့အခါ, 0,393 စက္ကန့်ကျော် Generate ။